Izikhokelo ze-Android yiwebhusayithi ye-AB ye-Intanethi. Kule webhusayithi sikhathalele ngokwabelana ngeyona tutorials ibalaseleyo kwi-Android, ezona zicelo zibalaseleyo kunye nemidlalo kunye nawo onke amaqhinga okufumana uninzi kwi-smartphone yakho ye-Android. Iqela lethu lokuhlela lenziwe linomdla malunga nehlabathi le-Android, elijongene nokuxelela zonke iindaba kwicandelo kunye nokuvavanya ii -apps ezicetyiswayo.
Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, ungaqhagamshelana nathi usebenzisa le fomu.
Isidanga somthetho, ukuthanda ukufunda kunye nemidlalo. Amaqela am yi-CP Cacereño kunye neFC Barcelona. Umthandi wetekhnoloji, ukufota kunye nayo yonke into ejikeleze umhlaba we-Android. Ndibhala izifundo kunye nokudityaniswa kwale nkqubo yokusebenza endiyibhalileyo kwaye ndijongana nayo iminyaka.
UDaniel Gutierrez Arcos
Ndaqala kwihlabathi le-Android nge-HTC Dream ngo-2008, ifowuni endinayo kwaye isasebenza. Ukuthanda izicelo, imidlalo kunye nantoni na enento yokwenza nenkqubo kaGoogle.
Umfundi wezomthetho kunye nentombazana ye-geek. Njenge techie elungileyo ndingumthandi wobuchwephesha obutsha kwaye ngakumbi yonke into enxulumene nendalo yonke ye-Android
Umsebenzisi othembekileyo we-Android okoko ndisebenzisa inkumbulo. Umbhali okhethekileyo kwiindaba zikaGoogle zokudlala kunye nomdlalo weqonga ukusukela ekuzalweni. Ndiyayithanda imidlalo yokudlala.
UIgnacio Lopez Sala
Ndaqala kwizakhono zam zokufundisa njengonjingalwazi kwiziko lenzululwazi yeekhompyuter ngaphezulu kweminyaka engama-20 eyadlulayo. Ukusukela ngoko, bendilukhulisa ulwazi lwam lujolise kwizixhobo eziphathwayo, apho ndenze khona nomsebenzi wam njengomdwelisi weenkqubo.